Puppy Linux Quirky 8.2, vhezheni nyowani yekureruka kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Puppy Linux Quirky 8.2, vhezheni nyowani yekuparadzira kurema
Mushambadzi Barry Kauler achangobva kuzivisa kuwanikwa kweshanduro nyowani yePuppy Linux Quirky. Iyi vhezheni yakadaidzwa Puppy Linux Quirky 8.2 uye semumapurogiramu apfuura, iko kugovera kuchiri kunobva paUbuntu LTS. Ino nguva vhezheni itsva inoshandisa Ubuntu 16.04.2 LTS se base, yazvino yakakura yekuvandudza kune iyo LTS vhezheni yeUbuntu.
Uye kutora mukana weichi chiwedzero, timu yePuppy Linux yatora mukana iwoyo kugadzirisa mamwe ese software yekuparadzira uye kuita kuti ireruke kupfuura nakare kana zvichikwanisika.
Puppy Linux Quirky 8.2 inosanganisa rutsigiro rweAUFS, rutsigiro rwunoita kuti ukanganwe pamusoro peOverlayFS. Iyo Linux kernel inosvika vhezheni 4.11.11, yakasarudzika vhezheni vhezheni kunyangwe isiri yazvino iripo yekernel. Iyo desktop yakashandiswa ichiripo iyo JWM windows maneja achiperekedzwa nePcmanFM faira maneja. Iyi sarudzo ndiyo yakanyanya kureruka iripo asi zvakare neiyo ine mashoma maitiro.
Zvimwe zvirongwa zvakabviswa kubva mukuparadzirwa senge VLC, multimedia player, izvi zvakatsiviwa naXine, mutambi akareruka kana zvichibvira. Mozilla SeaMonkey inosvika vhezheni 2.48b1, yakagadzikana vhezheni yeiyi imwe nzira kuMozilla Firefox.
Puppy Linux Quirky 8.2 ndeye yakagadziridzwa vhezheni yekuparadzira, iyo isingori chete inowedzera mabasa matsva asiwo inogadzirisa zvakare zviputi uye matambudziko akawanikwa mukuparadzira uye muUbuntu 16.04, saka zvinokurudzirwa kugadzirisa kune iyi vhezheni kana tikashandisa Puppy Linux. Iwe unogona kuwana kugovera uku kuburikidza yayo yepamutemo webhusaiti, Zvisinei, Kana iwe uine Puppy Linux Quirky 8.1, haugone kuve neshanduro iyi parizvino pakombuta yako sezvo isati yaiswa kunzvimbo dzepamutemo dzekuparadzira. Ivo parizvino vari kushanda pakuisa iyo nyowani vhezheni yekuvandudza Puppy Linux Quirky pasina kudzima komputa.
Puppy Linux ndeyekureruka kugovera, pamwe iyo yakareruka iripo uye inoshanda zvakanyanya, sezvo paine mamwe akareruka asi asiri kushanda seQuirky.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Puppy Linux Quirky 8.2, vhezheni nyowani yekuparadzira kurema
Mamwe marobhoti iwe ausingazive akashanda neLinux